ESI TINYE ỤLỌNGA NA EXCEL - EXCEL - 2019
Tinye mkpụrụ ndụ gaa na Microsoft Excel
Dịka iwu, maka ọtụtụ ndị ọrụ, itinye mkpụrụ ndụ mgbe ị na-arụ ọrụ na Excel anaghị anọchite anya ọrụ dị mgbagwoju anya. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị mmadụ niile maara ụzọ niile a ga-esi eme ya. Ma n'ọnọdụ ụfọdụ, iji otu usoro ga-enyere aka belata oge eji na usoro ahụ. Ka anyị chọpụta ihe nhọrọ maka ịgbakwunye mkpụrụ ndụ ọhụrụ na Excel.
Hụkwa: Otu esi tinye eriri ọhụrụ na teepu Excel
Esi tinye otu kọlụm na Excel
Usoro mgbakwunye usoro
Gee ntị ozugbo banyere otú usoro usoro ntinye ụlọnga si arụ ọrụ nkà na ụzụ. Site na nnukwu, ihe anyị na-akpọ "ịgbakwunye" bụ, n'eziokwu, otu mmegharị. Nke ahụ bụ, mkpụrụ ndụ na-agafe na aka nri. A na-ehichapụ ihe ndị dị na nsọtụ mpempe akwụkwọ mgbe a gbakwunyere mkpụrụ ndụ ọhụrụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịgbaso usoro a kapịrị ọnụ mgbe mpempe akwụkwọ jupụtara na data site na pasent 50. Ọ bụ ezie na, e nyere ya na nsụgharị nke Excel ugbu a, e nwere 1 nde ahịrị na ogidi na mpempe akwụkwọ, na omume a dị mkpa nke ukwuu.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ị gbakwunye mkpụrụ ndụ kpọmkwem, ma ọ bụghị usoro dum na ogidi, mgbe ahụ, ị ​​ga-eburu n'uche na na tebụl ebe ị na-arụ ọrụ ahụ a kapịrị ọnụ, a ga-agbanwe data ahụ, ụkpụrụ ndị ahụ agaghị adakọkwa na ahịrị ma ọ bụ ogidi ndị kwekọrọ na mbụ.
Ya mere, anyị na-atụgharị ugbu a n'ụzọ ụfọdụ iji tinye ihe na mpempe akwụkwọ ahụ.
Otu n'ime ụzọ kachasịsịsị esi gbakwunye mkpụrụ ndụ na Excel bụ iji menu ndokwa.
Họrọ ihe mpempe akwụkwọ ebe anyị chọrọ itinye mkpụrụ ndụ ọhụrụ. Anyị na-eji bọtịnụ òké aka pịa ya. Na-etinye aka na menu ndokwa. Họrọ ọnọdụ na ya "Tapawa ...".
Mgbe nke ahụ gasịrị, obere ntinye window ga-emepe. Ebe ọ bụ na anyị nwere mmasị ịtinye mkpụrụ ndụ, ọ bụghị usoro dum ma ọ bụ ogidi, ihe ndị ahụ "Eriri" ma "Nchịkọta" anyị na-eleghara anya. Mee nhọrọ dị n'etiti ihe dị n'etiti "Sel, jiri ngbanwe gaa n'aka nri" ma "Sel, na nkwụsị ala", dịka atụmatụ ha maka nzukọ nke okpokoro. Mgbe emechara nhọrọ, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahọrọ nhọrọ "Sel, jiri ngbanwe gaa n'aka nri", mgbe ahụ mgbanwe ndị ahụ ga-ewere ụdị dịka dị na tebụl n'okpuru.
Ọ bụrụ na nhọrọ ahọrọ na "Sel, na nkwụsị ala", tebụl ga-agbanwe dị ka ndị a.
N'otu aka ahụ, ịnwere ike ịgbakwunye ụyọkọ mkpụrụ ndụ dum, naanị maka nke a, ị ga-ahọrọ nọmba kwesịrị ekwesị nke ihe ọ bụla tupu ịga na menu ihe.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agbakwụnye ihe ndị ahụ site na otu algọridim ahụ nke anyị kọwara n'elu, ma ọ bụ naanị site na otu ìgwè.
Usoro 2: bọtịnụ na teepu
Ịnwekwara ike ịgbakwunye ihe dị na mpempe akwụkwọ Excel site na bọtịnụ ahụ na rịbọn. Ka anyị lee otú e si eme ya.
Họrọ mmewere na ebe mpempe akwụkwọ ebe anyị na-ezube ime mgbakwunye nke cell. Bugharịa na taabụ "Home"ma ọ bụrụ na ị nọ ugbu a. Wee pịa bọtịnụ ahụ. Tapawa na ngọngọ nke ngwaọrụ "Sel" na teepu.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-atụkwasị ihe ahụ na mpempe akwụkwọ ahụ. Na, n'ọnọdụ ọ bụla, a ga-agbakwunye ya na mgbada. Ya mere, usoro a ka dị obere karịa nke gara aga.
Iji otu usoro ahụ, ịnwere ike ịgbakwunye otu mkpụrụ ndụ.
Họrọ ụdị nke dị na mpempe akwụkwọ ahụ ma pịa akara ngosi ama Tapawa na taabụ "Home".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-etinye otu ìgwè ihe mpempe akwụkwọ, dịka na otu ntinye, na ngbanwe nke ala.
Ma mgbe ị na-ahọpụta akụkụ nke mkpụrụ ndụ sel, anyị na-enweta ihe dịtụ iche.
Họrọ otu akụkụ nke vetikal ma pịa bọtịnụ ahụ. Tapawa.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, n'adịghị ka nhọrọ ndị gara aga, na nke a, a gbakwụnyere otu ìgwè dị iche iche na ngbanwe gaa n'aka nri.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye ọtụtụ ihe nwere njirimara na nhazi ihu na nha anya n'otu ụzọ ahụ?
Họrọ nhazi nke nkwekọrịta kwekọrọ na pịa bọtịnụ ahụ maara anyị. Tapawa.
Dị ka ị ga-ahụ, a ga-atụnye ihe ndị dị na nkwụsị aka ziri ezi na mpaghara a họọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa kpọmkwem ebe ihe ndị dị mkpa kwesịrị ịkwaga, na, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-agbakwụnye ihe n'usoro ịchọrọ ka ngbanwe ahụ daa, ị ga-eso ntuziaka ndị a.
Họrọ otu mmewere ma ọ bụ otu nke ihe dị na ebe anyị chọrọ itinye. Anyị anaghị pịa bọtịnụ maara Tapawa, na triangle, nke egosiri n'aka nri ya. Ndepụta omume ga-emepe. Họrọ ihe dị na ya "Fanye sel ...".
Mgbe nke a gasị, windo ntinye ahụ nke mbụ na-emepe ka anyị maara. Họrọ nhọrọ ntinye. Ọ bụrụ na anyị, dịka e kwuru n'elu, chọrọ ime ihe na ngbanwe dị ala, wee gbanwee ọnọdụ ahụ "Sel, na nkwụsị ala". Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-agbakwụnye ihe ndị ahụ na mpempe akwụkwọ ahụ na ngbanwe dị ala, ya bụ, kpọmkwem dị ka anyị setịpụrụ na ntọala.
Ụzọ kachasị ngwa iji gbakwunye mpempe akwụkwọ na Excel bụ iji kpochapụ ọkụkey.
Họrọ ihe dị na ebe anyị chọrọ itinye. Mgbe nke ahụ gasị, pịnyere ụzọ mkpirisi keyboard na keyboard Ctrl + Shift + =.
Mgbe nke a gasịrị, obere windo maka ịtinye ihe ndị anyị ma anyị ga-emeghe. N'ime ya, ịkwesịrị ịtọ ntọala mmebi na nri ma ọ bụ ala ma pịa bọtịnụ ahụ "OK" n'otu ụzọ ahụ anyị si mee ya karịa otu ugboro na ụzọ gara aga.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-etinye ihe ndị dị na mpempe akwụkwọ ahụ, dị ka nhazi mbụ ndị e mere na paragraf mbụ nke akwụkwọ ntuziaka a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ụzọ atọ dị mkpa isi tinye mkpụrụ ndụ n'ime tebụl: iji ihe ndị dị na gburugburu, bọtịnụ na rịbọn na igodo dị ọkụ. Ọrụ nke usoro ndị a bụ otu, ya mere, mgbe ị na-ahọrọ, nke mbụ, ihe dị mma maka onye ọrụ na-emetụta. Ọ bụ ezie na, n'ezie, ụzọ kachasị mkpa bụ iji hotkeys. Ma, ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị ndị ọrụ niile na-ejide ọnụ na-ekpo ọkụ na Excel na ebe nchekwa ha. Ya mere, usoro ngwa ngwa a agaghị adaba maka onye ọ bụla.